Siminaar loo soo xiray maamulka kooxaha kubadda cagta heerka koowaad ee Soomaaliya – Gool FM
Siminaar loo soo xiray maamulka kooxaha kubadda cagta heerka koowaad ee Soomaaliya
jilacow July 31, 2017
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa soo gaba gabeeyay Siminaar ay u qabteen maamulada kooxaha heerka koowaad ee dalkeena Soomaaliya.
Siminaar ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay 10-ka kooxood ee xilli ciyaareedkaan dhamaadka ah ka soo muuqanaya horyaalka koowaad ee dalkeena.
Ujeedka aqoon kororsiga ayaa ahaa in la helo koox maamulkeeda uu u dhameystiran yahay, waxaana bixinayay macalimiinta kala ah Cali Saciid, Maxamed Cali Makiino iyo Jamaal Xaashi.
Gaba gabada Siminaarka ayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya C/Qani Saciid Carab waxaa uu ka qeyb qaadayaashaada Siminaarka ka dhageystay waxa yaabihii ay kaa faa’deen , iyagoo sidoo kale soo gudbiyay talooyin hor mar abuuri kara.
“ Waxaan u mahad celinayaa macalimiintii bixineysay Siminaarka, sidoo kale waxaan mid taa la mid ah u dirayaa maamulka kooxaha oo waqtigooda noo huray, waxaana idinka rajeyneynaa in wixii aad barateen aad u gudbin doontaan kooxdiina ayuu yiri C/Qani Saciid Carab oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyay maamulka kooxaha taasoo cadeyneysa in ay qaateen siminaar soconayay laba maalin, xilli sare loogu qaadayay kubada cagta.
Madaxweynaha La Liga oo bah dilay Neymar
Xiriirka u dhexeeya Neymar iyo ciyaartoyda Barcelona oo sii xumaaday